हेटौंडामा तयार भयो २५ फिट अग्लो बुद्धमूर्ति - ParyatanBazar.com
हेटौंडामा तयार भयो २५ फिट अग्लो बुद्धमूर्ति
असार २७,काठमाडौँ। हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१८ को गुम्बाडाँडास्थित पर्यटकीय पार्कमा ढुंगाबाट निर्मित २५ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति करिब तयार भएको छ । कोरोना सन्त्रासका कारण मूर्ति उद्घाटन भने हुन सकेको छैन । ललितपुरको बालकुमारीमा मूर्तिकार अमर शाक्यले ढुंगाको मूर्ति कुँदेको तर कोरोना प्रभावका कारण अनावरण गर्न नसकिएको बुद्धमूर्ति निर्माण संयोजन समिति संयोजक कमलचन्द्र सुमनले बताए ।
काठमाडौंका समाजसेवीहरु सुर्यब्रज लामा, सम्पूर्ण कुमार लामा, दुर्गामान शाक्य, शान्तरत्न शाक्य, किरणरत्न शाक्य, राजेश्वरी श्रेष्ठ, डा. बषन्तमान श्रेष्ठ, ज्योतिरत्न ब्रजचार्य सुभाषराज शाक्यले मूर्ति निर्माणका लागि करिब २ करोड बढी जुटाएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने स्थान निर्माण र मूर्ति रहने स्थानसम्म पुग्ने सिँढी निर्माणका लागि ३५ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । १८ नम्बर वडाले भने ५ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
हर्नामाडीस्थित ‘कलागाउँ’ का रुपमा परिचित गुम्बाडाँडालाई बौद्धमय बनाउन शाक्यमुनि गौतम बुद्धको २५ फिट अग्लो ढुंगाबाट निर्माण गरी स्थापना गरिएको हो । मूर्ति स्थापना समिति संयोजक हेटौंडाका समाजसेवी सुमनले मूर्ति निर्माणका लागि कलाकार शाक्यसँग ४५ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको बताए । उनले मूर्ति स्थापनापछि उक्त क्षेत्रको मुहार फेरिने बताएका छन् ।
मूर्ति निर्माण समितिले काठमाडौंको बौद्धमा गरेको एक कार्यक्रममा एकैदिन १६ लाख ४० हजार रुपियाँ सहयोग संकलन भएको थियो । मूर्तिका लागि आवश्यक ढुंगा कुलेखानी, बनेपा र दक्षिणकाली जंगल क्षेत्रबाट लगिएको मूर्तिकारले जनाएका छन् ।
गत वर्षकै बुद्ध पूर्णिमाका दिन शिलान्यास गरिएको मूर्ति निर्माण तथा स्थापना र उक्त स्थानमा पार्कलगायत संरचना निर्माणका लागि करिब ३ करोड खर्च अनुमान गरिएको सुमनले जानकारी दिए । उनका अनुसार मूर्ति स्थापनासँगै उक्त क्षेत्रमा विभिन्न स्तुपा, ९० किलोको घण्टी, भवनहरु, पानीट्यांकी, मनोरञ्जन पार्क, कम्पाउण्डवाल र अन्य संरचना बन्ने क्रममा छन् । नेपालमा पहिलो पटक ९० किलोको घण्टी यहाँ राख्न लागेको बताए । ठुलो घण्टी विश्वमा ६० स्थानमा छ हेटौंडामा भने ६१ औं स्थान हुनेछ उनले भने ।
गुम्बाडाँडा हेटौंडा बजारबाट करिब १७ किमी पूर्व दक्षिणमा पर्दछ, जहाँ पछिल्लो समय बिदाका दिन आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ । सल्लाघारी भनिने ठाउँमा गुम्बा स्थापनापछि ‘गुम्बाडाँडा’ नामाकरण भएको हो । गुम्बा स्थापनापछि सामाजिकरुपमा चहलपहल हुँदै गर्दा सुरुवाती हिसाबमा मंगलसिं लामाको नेतृत्वमा २०६१÷०६२ ताका उक्त क्षेत्र स्थापना गरिएको हो ।
२०६९ सालमा त्यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा कुँदिएका मूर्तिहरु त्यहाँ छन् । नेपाल र अन्य पाँच वटा देशका २३ मूर्तिकारले कुँदेका २३ प्रकारका मूर्ति गुम्बाडाँडामा सजाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालासँगै गुम्बाडाँडाको हालको रुपसम्म ल्याउने श्रेय कलाकार लक्ष्मण भुजेल र डा. तारालाल श्रेष्ठ, प्राज्ञ ओम खत्रीलाई जान्छ ।
धरान–चतरा मार्गनजिक उक्त क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावनाका स्रोत धेरै छन् । हेटौंडामा मानिसको चाप बढ्दो छ । केवल १७ किलोमिटर परको क्षेत्र भएकाले दुरीका हिसाबबाट पनि एकान्त गुम्बाडाँडा पुगिसकेपछि त्यहाँको दृष्य आफैंमा मनमोहक छन् । करिब एक बिगाहा क्षेत्रमा बुद्धमूर्ति र अन्य संरचना रहेका छन् भने ४.२५ हेक्टर क्षेत्रमा कला प्रतिष्ठान रहेको छ ।